Mabhuku mashanu ekutanga chikoro mushe (kana zvine mushe) | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Vechidiki Mabhuku
Kutanga kwaGunyana. Yasvika nguva yekudzokera kuchikoro. Handina kumbozvifarira, asi zvinoshamisa kuti manje vanin'ina vangu vari kuzvitarisira. Zvinhu zvinoitika. Izvo zvaunofanirwa kuramba uchiita, usina kana nechikoro, kuverenga. Uye wadii kuzviita paari? Izvi ndizvo 5 mazita emazita evana nevechidiki zvinyorwa (izvozvi nekusingaperi) -uye kubata kwevakuru- kuita kuti kudzoka kwacho kutakurike.
1 Chikoro chakapusa pasirese - Pablo Aranda
2 Anecdotes kubva kuvadzidzisi - Carlos G. Costoya
3 Katsi kuchikoro - J. Patrick Lewis
4 Santa Clara naMalory Towers - makosi ese - Enid Blyton
Chikoro chakapusa munyika - Pablo Aranda
Yakagadzirirwa vaverengi kubva pamakore makumi matanhatu, bhuku iri rinotiudza nezvazvo Fede chikoro, chikoro icho chiri chisingawanzo munyika. Yakatumidzwa zita TV: Techno Chikoro Chemimwe Mitauro. Chinoita kuti chive chakakosha ndechekuti kana mwana aenda, anoenda nemubereki wekutanga asvika, uye anofanira kumubata semwana wake chaiye ndozoidzosa kuchikoro mangwana acho. Saka kuda kuziva kunopihwa. Esther Gomez Madrid isa mifananidzo.
Dzidziso dzevadzidzisi - Carlos G. Costoya
Iwo mabhuku maviri mune rimwe. Iyo chikamu chimwe Ndicho kusarudzwa kwezviitiko zvevadzidzisi kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzavanoongorora mamiriro ehunyanzvi hwavo nedzidzo zvakajairika munyika medu. Uchapupu pane ese anopisa misoro kubva kuchisimba kwechikoro kusvika kudheerera, kubva pachiremera kusvika kune vanoenda kune dzimwe nzvimbo mumakirasi kana kubva kuchikoro kutadza kusvika kudanidziro yemudzidzisi.
La chikamu chechipiri chitsva anthology yezvisina maturo nema anecdotes inounganidzwa nevadzidzisi vepuraimari nesekondari muzvikoro zvakazvimiririra uye zveveruzhinji. Uye izvo zvinoisa iyo comic toni uye zvakare kuratidza kwekuti inhandare yekutamba iri sei.
Mboro kuchikoro - J. Patrick Lewis
Con mifananidzo naAilie Busby, bhuku iri inyaya yevana kubva pamakore makumi matanhatuNdokureva kune avo vachiri kutadza kuverenga kana kuti vari kutanga. Saka ndizvo yakanyorwa mundima uye kuverengerwa zvinonzwika, chaizvo kuitira kuti mutinhimira ubatsire mwana kuzviisa mumusoro.
Anotaura nyaya ya katsi yakasiyiwa yakawanikwa nemuchengeti wechikoro uyo anosarudza kuzviendesa kukirasi nemufaro unotevera wevana vese. Mhandara inotora mukana iwoyo kuvaudza nezve hupenyu hwake netsika dzake. Uye kati, yakafara, ichafunga kugara ipapo.
Santa Clara uye Malory Towers - makosi ese - Enid Blyton
Uye sei kusataura izvi maviri echinyakare par kugona kubva kune wequintessential wechidiki munyori uyo ari weBritish Enid Blyton. Dzimwe dzeangu ndangariro dzakanakisa dzechikoro dzakabatana neraibhurari pachikoro changu uko, nemusi weChishanu masikati, ini ndaipfuura nemumazita ake aivapo. Ehe, ndaivada chaizvo Vashanu, asi kushaya simba kwangu ivo vaigara vari zviitiko uye zvisirizvo zvevasikana veChirungu muzvikoro zvavo: Santa Clara naTorres de Malory.
Ivo vaviri muunganidzwa wemakosi ese mune yega yega mavo mave nezvishongo zvidiki zvandinokoshesa pamashefu angu. Ndakaaverenga semunhu mukuru uye ndichiri kuvada. Panyaya invoice inodzokororwa kunyangwe ivo protagonists vakasiyana, idzi mbiri dzakateedzana, yakanyorwa mumakore makumi mana nemakumi mashanu, ivo vaive vatove echinyakare mune iwo ari kure kunonoka 70s uye kutanga makumi masere.
Iye zvino pane zvinyorwa zvitsva nemimwe mienzaniso yemwana-kana zvimwe zvinoenderana nenguva-, asi iko kusara kwakangofanana. Aya ndiwo mazita avo:
Con mapatya Patricia (Pat) naIsabel O'Sullivan seva protagonists. Uye zvikoro zvakawanda zvepamusoro zvinoshanduka mumakosi ese.
Mapatya anochinja zvikoro
Iwo O'Sullivan mapatya
Mapatya muSanta Clara
Gore rechipiri muSanta Clara
Claudina muSanta Clara
Giredhi rechishanu kuSanta
Con Darrell nzizi semutambi wayo.
Chekutanga kosi muTorres de Malory
Chechipiri giredhi kuMalory Towers
Gore rechitatu kuTorres de Malory
Giredhi rechina paMalory Towers
Giredhi rechishanu kuMalory Towers
Yekupedzisira kosi muTorres de Malory
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku mashanu ekutanga chikoro zvakanaka (kana zvakaringana)